3000 Oge opupu ihe ubi | Rayson
3000 Oge opupu ihe ubi
Rayson bụ ụlọ ọrụ dị mkpa nke nwere ike inye ndị ahịa ngwaahịa nwere ngwaahịa dị elu gụnyere ngwaahịa kachasị ọhụrụ nke 3000 matraasi na ọrụ zuru oke. Ndị otu ọrụ anyị na-arụ ọrụ n'ịntanetị iji nye ndị ahịa site na mba dị iche iche na mpaghara ndị nwere ọrụ ngwa ngwa. Itinye ọrụ na mbụ nke onye ahịa mbụ, anyị na-enye ọrụ nnyefe ngwa ngwa ozugbo anyị gụchara usoro mmepụta na QC. Ọ ga-amasị anyị idozi nsogbu ma zaa ajụjụ niile maka ndị ahịa. Kpọtụrụ anyị ozugbo.
Na zuru ezu 3000 mmiri ube matralites zuru ezu na ndị ọrụ nwere ahụmahụ, ndị na-eweta ndị na-emepụta ihe, na-etolite, na-emepụta ihe niile dị arụ ọrụ. N'oge niile usoro ahụ dum, ndị ọkachamara QC anyị ga-elekọta usoro ọ bụla iji hụ na ogo ngwaahịa. Ọzọkwa, nnyefe anyị bụ n'oge, nweekwa ike igbo mkpa nke onye ahịa ọ bụla. Anyị na-ekwe nkwa na ezigara ndị ahịa na nchekwa na ụda. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ chọọ ịmatakwu banyere ọla ọkụ mmiri 3000 anyị, kpọọ anyị ozugbo.
Rayson bụ ụlọ ọrụ na-akwụghachi ụgwọ maka imeziwanye teknụzụ na-arụpụta na R & D Ike. Anyị na-akwado ya na igwe dị elu ma mekwaa ọtụtụ ngalaba iji gboo mkpa dị iche iche nke ndị ahịa. Dịka ọmụmaatụ, anyị nwere ngalaba ọrụ anyị nke nwere ike inye ndị ahịa nwere ọrụ dị oke arụ ọrụ. Ndị otu ọrụ bụ njikere mgbe niile iji jee ozi ndị ahịa si mba dị iche iche na mpaghara dị iche iche, ma nwee njikere ịza ajụjụ niile. Ọ bụrụ na ị na-achọ ohere azụmaahịa ma ọ bụ nwee mmasị na matraasi 3000 mmiri, kpọtụrụ anyị.